SMD Desoldering ဘူတာ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေ Desoldering ဘူတာ -> SMD Desoldering ဘူတာ
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. အထူးပြုတဲ့သူအတွက်အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ရာဖြစ်ပါသည် SMD Desoldering ဘူတာ တွင် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အရည်အသွေးသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်စာမေးပွဲ၏ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူအဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေ, ယာဉ်နှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်ဆိုင်သည်။ ပိုပြီးစတိုင်များ, ကျေးဇူးပြု. ချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
မူလ developer အဖြစ်
ကျနော်တို့အများဆုံးယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြပါတယ်။ MOQ ညှိနှိုင်း, စျေးနှုန်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှအခမဲ့ခံစားကြရသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့နှစ်တိုင်းသင်္ဘောကြီးပေါ်မှကြီးမားသော quatity export ။
အမွှာ Output အပူချိန်-ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂဟေဘူတာ
အဆိုပါ Xytronic LF-5200 တစ်လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အပှေါ cable ကိုနှစ်ယောက် plug-in ကို 120w ဂဟေ၎င်းနှင့်အတူတစ်အမွှာ output ကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဂဟေဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။
●နှစ်ဦးလွတ်လပ်သော 120W ရလဒ်။
●အပူချိန်အကွာအဝေးက 100 520 မှဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
° C သို့မဟုတ်° F ကိုဖြစ်စေအတွက်●အပူချိန် display ကို
● Fast နွေး-up time ကို။
သော့ခတ် setting ●မလုပ်မဖြစ် password ကိုအပူချိန်။
●သုညဗို့ switching ထိခိုက်ဗို့ချပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ပေးသည်။
● grounded ပျဉ်း - 0.4mV ထက်ယိုစိမ်လျော့နည်း
ဂဟေဆက် Desolder ဘူတာ